Pebble dia mampihena ny vidin'ny smartwatches | Vaovao IPhone
Pebble dia iray amin'ireo orinasa voalohany nanaporofo fa ny sehatra fidiram-bola dia mamela antsika hanatanteraka ny tetikasanay ary koa naneho ny tombotsoan'ny mpampiasa amin'ny smartwatches. Ny Pebble voalohany an'ny orinasa dia fahombiazana, ary toy izany koa ilay maodely vy tonga herintaona taty aoriana.
Saingy ny maodely farany indrindra izay natolony tamin'ny efijery miloko sy endrika boribory dia tsy nahatratra ny mpampiasa izany na eo aza ny vidiny ahitantsika azy ireo. Ny maodely Pebble farany misy takelaka miloko dia ratsy tarehy raha ny fahitako azy Ary lazain'ny mpampiasa Pebble Steel izay nisotro ronono ilay fitaovana mba hankafizany Apple Watch izao.
Ny mpanamboatra famantaranandro Pebble dia manana mampihena ny vidin'ny maodely Steel and Classic, izay raha nanana vidiny mahaliana izy ireo, amin'izao fihenam-bidy izao dia mety hahatonga azy ireo tsy ho resin'ireo mpampiasa rehetra te hanandrana famantaranandro tsy mandany vola be, na dia misy aza ireo maodely farany indrindra, toy ny Time Round sy ny Time Steel vidiny ambonin'ireo fiambenana toy ny Moto 360 voalohany.
Fa raha tsy misy mifanaraka amin'ireto maodely ireto ianao, na mila iray amin'ireo maodely voalohany natombok'ilay mpanamboatra eny an-tsena ary tsy tafiditra ao anatin'ity fampiroboroboana ity ianao dia afaka mahazo fihenam-bidy 10% amin'ireo maodely ireo. Manakaiky kokoa ny fialantsasatra ary maniry ny hanao ny volana aogositra i Pebble, toy ny orinasa elektronika rehetra. Ary tsy misy mora kokoa noho ny manomboka alohan'ny Zoma Mainty malaza mba hahatsiarovan'ny mpampiasa azy rehetra azy rehefa mividy ny fanomezana Krismasy manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Pebble dia mampihena ny vidin'ny smartwatches
dtomasf dia hoy izy:
Ny fihenam-bidy 35% dia toa an'ny Etazonia ihany, ary mety ho € 64 izany, fa rehefa mijery azy any Espana ianao, € 129 ...
Valio i dtomasf
ny hovidiana dia hoy izy:
Eny, nieritreritra ny hanatsara ny vy vy Pebble aho hahita an'ity fanavakavahana ity, hitranga aho, fa mandrakizay. Etsy ankilany, mangataka amin'ny mpanoratra ny lahatsoratra aho mba hifantoka amin'i Espana fa tsy ho entina any ivelany ary hanadihady kely kokoa.
Valiny amin'ny sarety